Mbaghathi: Dib-u-heshiin mise dib-isu-bahaysi?
» WAX RAG KULA LEEYAHAY LA ISMA KELI SIIYO!! [Warsame]
» SALFUDEYDKA C/WAXID, QORAALKA XAGARYARE & XAALKA [Dirir]
» Xirfadaha uu C/hi uga tago xerada Mbagathi [C/Waaxid]
» CAGTII JOOGSAN WEYDAA MAR BEY CEEB LA KULANTAA [Farah]
C/laahi Yuusuf ma laha Puntland ee Dadkaa leh
Waa Jawaab Qoraalkii Puntland: Tahriibkii Badday ku Tuureen Guji..
C/Waaxid waa caamo Laakiin Cadowgiisa waa yaqaan
Waa Jawaabtii uu C/Waaxid kabixiyey Qoraalkii Cusman Axmed Guji
»JAWAAB QARAALKII C/WAXID KA QORAY TII XAGARYARE [Farah]
Sheeko Xariirta Xagar Yare
Waa jawsaabtii C/Waaxid Khaliif ee Qoraalkii Xagar Yare ee.. Guji..
QAYBTII 2aad: WAA KUMA CABDULLAAHI YUUSUF?
Qaybta 1aad... | Qaybta 2aad... | Qore: XagarYare | Sept 1
Puntland: Tahriibkii Badday ku Tuureen, Tabliiqiina Xabsi
Tif-tif Amxaarana madaxweynanimo bay usoo taageen! C/Waaxid
» CALI-DHUUX iyo CABDULLAAHI YUUSUF! [Cali Shire]
» Mala is-barbar-dhigi karaa Cali-Dhuux iyo C/hi? [C/Waaxid]
Waxaa Qur’aanku xussaa inuu cadaab ku soo dul-habsaday qolooyin gaalo ahaa markaasay u qaateen guulaamo iyo jinni-caal-madoobe/daruur madow waxayna fisheen roob iyo raxmad.
Waxaad is-leedahay Kiplagat ma hal-xiraalihii uu Gooni Sayidka waydiiyey buu isna qab-qablayaashii waydiiyey. Gooni wuxuu yiri:
Cir onkoday hillaac laga cabsaday karar cabaadaysa
Oon rays cirbaha laga dhigayn waa cajabe sheega?
Sayidku wuxuu ku jawaabay:
Onkod iyo hillaac laga cabsado iyo karar cabaadaysa
Oon rays cirbaha laga dhigayn waa cajab Ilaahe
Isagaa calaamiyo lahaa ciiro iyo qiiqe
Waa maarrahaan kuu cuskaday dirirtii caw-baare
Dhiiggii carrada qooyey waa cadar baxiisiiye
Maxaadse u tiri rays cag iyo ciribta maan saarin?
Sayidku sidii gaaladii karartaas uma qaadan raxmad ee wuxuu gartay in laga wado baaruud iyo danab. Nasiib-darro qab-qablayaashii may fahmin hal-xiraalahaas oo waxay u qaateen hillaaca iyo onkodka roob iyo barwaaqo. Waxay ugu darnayd markii uu yiri wajigii labaad ee shirka waa dhamaaday waxaa is-qabsaday sacab, qaylo iyo dhamaashaad madashii uu Kiplagat joogay. Maxaa loo dhamaashaadaa? Maxaa la isugu tahniyadeeyaa? Waa uun cadow siro callaqan u keenay si ay qalinka caamo ugu duugto. Ka soo qaad in loo kala jabay labo is-bahaysi bal aan fiirino is-bahaysiga la dhayalsanayo.
C/Qaasim, Muuse Suudi, Barre Hiiraale, Caato, Xaabsade, Cumar Jees, Jaamac Cali Jaamac iyo kuwo kale hadday jiraan. Is-bahaysigani wuxuu dhowr jeer ka xoog badanyahay ciidamadii Maxamed Faarax Caydiid qalab iyo siyaasad labadaba. Caydiidna Soomaali oo dhan waa gaaray marka Waqooyi Galbeed laga reebo. Wuxuu soo taabtay Gaalkacyo, Hiiraan, Baydhabo, Gedo, Xamar iyo Kismaayo. Ka warran Caydiid oo ay kusoo biireen reer Gedo, Kismaayo, Xamar iyo Baydhabo? Is-bahaysi saas u xoog-badan ma jirin shirka Kenya ka hor. Marka ma heshiis baan helnay mise colaad hor leh?
Ismalahayn Qanyare iyo Maxamed Dheere baa loo sharxayaa dagaal. Waan la soconaa wixii uu Caydiid kaligiis ku dhigay. Hadday caqli leeyihiin labadan nin cidda ay wada-degaan oo ay u baahanyihiin in ay marka hore wada-heshiiyaan waa tan C/Qaasim ee maahan tan C/hi. Marka si aad Soomaalida kale u caawisaan bal la soo heshiiya ina-adeerkiin kaddibna noo imaada haddii kale maaweelo iyo kooxaysi cidna uma baahna. Maxay tahay nabadda aad sheegaysaan haddii idinkii Xamar degayba aydaan heshiinayn?
Bishii ugu horaysay shirka waxaan qab-qablayaasha siiyey calaamad taban (negative) waxaan xussay in haddii:
-1 + (-1) + (-1) + (-1) + (-1) + (-1) + (-1) + (-1) + (-1) = -9. Si kasta oo aad u hormo-galiso waxaad helaysaa –9. Awal hal-hal ama labo-labo ayey usocdeen laakiin waxaa loo hormo-geliyey sidan –5 + (-4) = -9. Waxaan maqaalkaas ku sheegay in haddii la rabo in la helo tiro togan (positive) ah waa in la isku dhuftaa. Taladaas waxaa qaatay Kiplagat oo hadda raba inuu isku dhufto is-bahaysigii Xamar iyo kii shalay saxiixay. Marka ugu dambaysa waxaa soo baxaysa tiro togan laakiin waxaa maranaya dad, dal iyo duunyo. Waxaa jira qaab kale oo aan maqaalkaas ku soo xusnay oo tirada taban looga dhigo mid togan waa marka la gasho waxa loo yaqaan qiimo-sugan (absolute value). Qiimaha sugan waxaa laga helaa Diinta Islaamka ilayn iyadaa ah dowga noo furan. Marka waxaa la samayn karay in [-4] = 4 sidoo kale [-5 ] = 5. Marka qiimaha-sugani waa cismada Ilaah. Markaan shir leenahay waxaa la rabay in la waaniyo qab-qablayaasha oo la xasuusiyo aakhiro. In aan nahay dad walaalo ah. Dambiga uu leeyahay qofkii dila qof muslim ah. Inaan loo baahnayn in cadowga loo shaqeey iyo wax la mid ah iyo sidoo kale in la heshiisiiyo qab-qablayaasha dhexdooda. Wixii halkaas ka soo baxa waxaa la oran karaa heshiis. Laakiin wixii Kenya ka soconayey waxaa la oran karay waa siminaar (seminar) oo Kenya iyo Itoobiya ayaa wax iska soo diyaarsaday oo ku dul-akhriyey qab-qablayaasha.
Waxaa dhowaanahan gooddiyey labo hogaamiye kooxeed waa kornayl C/hi iyo Maxamed Dheere oo sheegay in ciddii hor istaagta heshiiska waajibkooda la marindoono, dagaalba ha ahaatee. C/hi wuxuu ku xoojiyey dhaar isagoo laga sheegay inuu yiri (WALLAAHI BILAAHI TALLAAHI). Waa tahay. Maxamed Dheere waa nin ku cusub saaxada oo isaga waa la sugi karaa wuxuu la soo shirtago laakiin kornaylka waxaan ka leeyahay seddex waxyaalood:
1. Haddii uu rabo inuu cidaha raro wuxuu raraa bil-seddex
2. Haddii uu rabo inuu qaado guluf colaadeed wuxuu gooyaa waa walaalihiisii ay isku caloosha ka soo baxeen.
3. Xagga siyaasadana wuxuu sameeyaa is-bahaysi isaga ka soo horjeeda.
Marka wuxuu meesha ka sheegay inuu intaas oo sano soo halgamayey ee yuu gooyey? Caydiid hadduu noolaanlahaa wuxuu awooday inuu yiraahdo “giddiga Soomaali tahay ninkii gaaray baan ahaye” laakiin bal C/hiyoow adigu hadal! Hadduu guduha qoladiisa dhaafo hadalkaygu waa been.
Anigu waxaan rumaystay Hadalka Ilaah oo ah “Walladii khabutha laa yakhruju ilaa nakidaa” oo ah dhulka kiisa xumaada ma soo saaro waxaan xumayn. Waa meesha Soomaalidu ka tiraahdo hal xaaraan ah nirig xalaal ah ma dhasho marka haddii qab-qable qaran keeno aniga ma ahan ninka qaadanaya. Marka shacaboow “godashaye u yeer-yeer gaanaha aad maashide”. Marka nabadda la gaaray aan qaadano!
Faafin: SomaliTalk.com | Sept 17, 2003